खुशी हुन के गर्ने ? पढनुहोस जीवन खुशी साथ बिताउनुहोश! - Arghakhanchi Saptahik
Home स्वास्थ्य खुशी हुन के गर्ने ? पढनुहोस जीवन खुशी साथ बिताउनुहोश!
खुशी हुन के गर्ने ? पढनुहोस जीवन खुशी साथ बिताउनुहोश!
‘पर्फेक्सन’को मोह त्याग्नुस
ऐना हेर्दा खुशी हुनुस
अरूले चाहेजस्तो नबन्नुस
सिर्जनात्मक काममा लाग्नुस
गहिरो सास लिने गर्नुस
चाहना कम गर्नुस
धेरै महत्वाकांक्षा नराख्नुस
स्वास्थ्य खबर बाट सभार